Vokatra momba ny teknolojia amin'ny studio ankehitriny dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Markertek sy TecNec | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Vaovao » Vokatra ny teknolojia Studio amin'ny alàlan'ny Markertek sy TecNec
Vokatra ny teknolojia Studio amin'ny alàlan'ny Markertek sy TecNec
Famenon-tsoloka tolo-tanana manolotra vahaolana amin'ny haino aman-jery teknolojia Studio amin'ny alàlan'ny fangatahan'ny mpanjifa
SKOKIE, IL, 29 JOLAY 2020 - Markertek Video Supply sy TecNec Distributing, orinasan'ny Tower Products Incorporated, no mpamatsy, mpamatsy fitaovam-pamokarana horonantsary ara-teknika mandritra ny 30 taona mahery. Ny fangatahana avy amin'ny fahitalavitra lehibe sy ny mpanjifa horonantsary ara-panatanjahantena dia nanentana an'i Markertek sy TecNec hanomboka hivarotra vokatra avy Studio Technologies, mpanamboatra vahaolana avo lenta audio, video, ary fibre optika. Nanomboka ny orinasa nanangana fiaraha-miasa mitombo, nohamafisin'ny tombony mafy avy amin'ireo mpanjifany.
"Studio Technologies manana anarana lehibe eo amin'ny indostrianay ho an'ny vokatra kalitao", hoy i Greg DeCelle, VP Marketing, Tower Products Incorporated. "Ny mpanjifanay dia faly foana amin'ny fampifangaroana amin'ireo rafi-pandehanana efa misy, ary nahazo valiny tsara izahay."
Ny fivoaran'ny fifandraisana amin'ny Studio Technologies dia mety ho an'i Markertek sy TecNec. Ireo orinasa roa ireo dia manamboatra toby mpanjifa mitovy, ao anatin'izany ny mpamokatra audio sy horonan-tsary amin'ny fahitalavitra, video fanatanjahantena, trano ivavahana, sekoly ary oniversite, orinasa, ary maro hafa. Ny vokatra Studio Technologies koa dia mifanaraka amin'ny modely manokana an'ny TecNec Distributing, izay manompo mpivarotra, mpivarotra, ary mpandrafitra rafitra.
"Mikaroka hatrany ny fomba hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifanay," hoy i Gordon Kapes, filohan'ny Studio Technologies. "Ny fampivelarana ny tamba-jotra famandrihanay amin'ny fampidirana an'i Markertek sy TecNec dia hetsika vaovao mahaliana ho anay ary miandrandra ny hiara-hiasa isika hanohanana ireo mpanjifa vaovao sy efa misy."
Markertek sy TecNec dia manolotra indrindra vahaolana intercom sy IFB avy amin'ny Studio Technologies, anisan'izany ny malaza Model 45DC Intercom Interface miaraka amin'ny fantsom-peo tsy miankina roa, andalana-tsipika Nanazava i DeCelle fa sokajy lehibe ny intercom. Tamin'ny valiny voalohany tamin'ny mpanjifany, dia nampiany izy fa mahita ny mety ho fivoarana lehibe avy amin'ny fifandraisany amin'ny Studio Technologies. "Ny teknolojia Studio dia mety tsara ho an'ny tsirairay amin'ireo mpanjifantsika hetsika mivantana," hoy izy. “Ankehitriny raha manana fifandraisana mivantana izahay, te-hanitatra ny fisafidianana ireo vokatra azontsika atolotra ny mpanjifantsika.
Studio Technologies, Inc. dia manome lanja maimaim-poana, video avo lenta, audio ary fiber optic ho an'ny tsena vokatra audio sy fampielezam-peo. Ny orinasa ao 1978 dia nanolo-tena hamolavola sy hamolavola ireo rindrambaiko azo antoka sy mahomby ary mamorona ho an'ny fampitana mivantana ny studio, kianja-na ary tontolo iainana. Fantatra amin'ny "famolavolana ny asan'ny manampahaizana", ny orinasa dia ekena ho mpitarika indostria. Ny sokajin'ny vokatra dia ahitana ny fitaterana fibre-optic, intercom sy IFB, interface console, ary rafitra fanaraha-maso an-tserasera. Ny tsipika mitombo amin'ny Dante-nahazoana alalana Audio-over-Ethernet dia nahazo fankasitrahana lehibe. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady ny tranonkala Studio Technologies www.studio-tech.com na antsoy 847.676.9177.
Markertek Studio teknolojia TecNec 2020-07-29
Previous: Ny pandemaly dia manamafy ny lanjan'ny fiaraha-miasa
Next: Fehezina miaraka amin'i Sara Glaser, CAS